Dep Mamitiana : miantso ny foloalindahy handinika manokana ny raharaham-pirenena – MyDago.com aime Madagascar
Dep Mamitiana : miantso ny foloalindahy handinika manokana ny raharaham-pirenena
Esory ny ahiahy ! Miha mazava ny raharaham-pirenena !
Fahefam-pitsarana manokana (CES)
Auteur Solo Razafy*Publié le 8 août 2011 Catégories Politique
12 réflexions sur « Dep Mamitiana : miantso ny foloalindahy handinika manokana ny raharaham-pirenena »
Izaho mino fa mbola mahafantatra be galona ao amin’ny tafika ingahy Ratsiraka ka mety afaka mifampiraharaha sy manamboatra ny sain’ireo.Tsy misy mangidy tsy andramana.
9 août 2011 à 18 h 15 min
Fa nanao inona ireo miaramila nandritry ny roa taona sy tapany ? Nanao belaoty sy rami tao an-dakazery fotsiny, sa nibalady teny Ambohitrakely ? Ny zavatra hafa tsy ho tantaraina eto fa mampivonto fo raky ny filazan’ny sasany !
Miaramila tsy tonga saina hatr’izay tsy ho tonga saina intsony ! Avelao ry zareo hifampidera « fanànana » ao ! Izay naha be ny azy indrindra !
Tsy hanadino velively ny vahoaka malagasy, amin’ny zavatra ratsy rehetra vitany !
Efa voasoratra sy voarakotra ao anatin’ny Boky menan’ny tantara, sy ao amin’ny internet daholo !
Hafa ny taloha ka hoe afenina amin’ny fara aman-dimby ny heloka natao ! 21e siècle izao, ka dia mbola ho avy ny fotoana « tena handinihina ny tantara » !
9 août 2011 à 18 h 40 min
Momban’ilay blindé ! Véhicule blindé iray ahavita inona ? Resaka entina handrebirebena saim-bahoaka indray ?
Dia ny gazety koa amin’izay, dia izany no atao « la Une » !
Tsy paiso ny vahoaka, ka aoka ho fantatr’izay nihevitra an’io fika motraka io, fa izy no tena venan sy voamanga !
Fa maninona indray ity vėhicule blindė ry Kintana fa tena tsy harako indray?
Ny fantatro dia toa i Alin Ramarosona no nangalatra io tomabilin’i dada io,sa
misy tantara hafa indray koa na tomabilina hafa mihintsy?
Ny ahy ny mba heritreritro ry zareo an!tena marina ity a! mba ho hataon’i domelina ao @’io restaurant vao2
ao Paris io ny sary mirakitra ny FANONGANAM-panjakana nataony dia hamafisiny ery @ farany fa izany no
nananany vola NIVIDIANANY io hotel restaurant io.
Dia mbola misy iray ,enga anie ka hifototra @ domelina daholo ireo MAFIA miaraka aminy @’izao io ka mba
hitsipatsipaka eo @ arabe anoloan’io Hoteliny io ny FATY toa ilay restaurant Italianina taty aminay taty taona
vitsy lasa izay,dia @’izay fotoana izay ho tsapany fa MAMY ny AINA fa tsy moka akory ny olona na PARASY
aminy ka » hataovy sorona » dia hatao koa.
VBL-n’ny miaramila ( Véhicule blindé léger, asa na VBL na VAB ) no tiako lazaina ê !
Nisy gazety nilaza fa saika nisy nangalatra ny iray tamin’izy ireo, ny Midi manoratra « au pluriel », ny dikany dia mihaotra ny roa izany koa asa na firy !
Fa hentin’iza hanaovana inona, satria zavatra tsy mora afenina ? Ny marimarina kokoa, dia mamorom-baovao indray ireo tsy valahara ireo, hilazàna fa TSY MILAMINA NY TANY !
Ho an’ireo miaramila izay efa mba tonga saina, tsara izy ireo miandry ny fanaovan-tsonia AM-PILAMINANA, rahatoa ka te hampiseho fitiavan-tanindrazana !
10 août 2011 à 9 h 06 min
Hay ve bla! bla! indray e! iza no ho hendrikendrehany @’izany fa tsy ireo miaramila mpandala
ny aradalana, dia hosambotsamboriny eo indray rehefa tsy mety manaraka azy,fantany mantsy
fa efa mihamaro ireo manohitra azy dia mitady hirika ihany aloha sao mbola mandaitra ny « fikan’antitra « efa nampiasaina
hatrizay,misy dikany daholo izany fa tsy mandehandeha foana fa aza variana isika fa fanadalana an! tetika hisamborana
olona indray io! toa ilay bombe kapoaka indray!
vao mipoitra ny soratra mivandravandra hoe ‘blindé’ dia tonga dé MISE EN SCENE arak’io voalaza io
(asa hono inon’indray ny manarak!!!)
10 août 2011 à 9 h 51 min
Nisy namosavy i domelina !!! Ambalavelona na ody-fitia dia lasa tia lehilahy, any ka faly dia faly ilay olona be ranomanitra iray izay !!! MDR !!!!!
10 août 2011 à 10 h 18 min
Ary ianao ity mahita sampona mihintsy ry Kintana! tapaka mihintsy ny tsinaiko marina!
Ny sampy tompoiny ihany no manody azy eo!fa iza no hamosavy olona efa MPAMOSAVY??
ny sampiny no mifototra aminy dia mifototra daholo ny hataony sy izay lazain’ny vavany,olona mbola tanora no
milalao ody ka haevaevany tsara mihintsy,Dia izy iO efa mitonantonana sisa fa tsy zakan ‘ilay loha keliny intsony.
10 août 2011 à 11 h 05 min
Marina anie izany ê, fa ianao angaha ?
Efa mivaha ilay io, matoa miteniteny fahatany tahak’izao isan’andro ! Izy hono no nahavita ny zavatra tsy nataon’ny sasany nandritry ny dimam-polo taona ! Marina dia marina izany fa tsy tokony hizesta amin’izany izy. Izay no maha mitapy azy !
Izy no gasy nahavita fanonganam-panjakàna !
Izy no namerina an’i M/car ho zanatany indray !
Izy no manao varo-boba ny harenan’ny malagasy !
Raha tsy izy, tsy hidina ho 3000 ariary, izany hoe any amin’ny 1 $ mahery kely ny vidin’ny lavanila !
Tsy mbola nahazo sazy toa izao i M/car, raha tsy izy !
Tsy ho voatanisako eto daholo ê !
Koa raha misy vaovao tena hahataitra ny vahoaka, dia tsy inona fa ny hoe :
Nilaozan’i domelina i Mialy, fa lasa ao amin’ny sexy-hell i lery !! Izany ka hoe soucoupe !!
Angano sa rira ? MDR !!!
TANGENA WAAA dia mety !
10 août 2011 à 15 h 59 min
Tena marina ve ity lazainao ry Kintana ? milay be izany vao2 izany,ka nahazo tsirony lery angaha T@
ireny fanonganam-panjakana ireny ,tsy efa nandeha hatramin’izany ireny vazaha niodiody lava niaro
azy ireny? Ramialy koa tsy latsak’izany! haiko tsara ny tantaran’i ity fikambanan’i devolin’ireo ity,tsy misy fady ,ary tena
mampivarahontsana ,sy mamoafady, biby aza mbola misy lanjany raha miohatra ireo.
Dia ho hatao « Case en folle » izany ilay hotely novidiany ao Paris raha izany no fandehany!Andrenesiko ianao o!
Précédent Article précédent : Nampita hafatra hoan’ny tanora ny filoha Ravalomanana !
Suivant Article suivant : Mektoub : ity tetezamita ity no be olona ratsy indrindra !